परदेशीका श्रीमतीलाई दोषी देख्ने कहिलेसम्म ? — Hamro Sanchar
परदेशीका श्रीमतीलाई दोषी देख्ने कहिलेसम्म ?
प्रकाशित : २०७५/२/१३ गते
धादिङ जेठ १३- एक महिलालाई कुटपिट भयो । घरबाट निकालियो । दुव्र्यवहार भयो । घरमा सम्मान पाइनन् भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईं के सोच्नुहुन्छ ? धेरैलाई लाग्न सक्छ महिला नै गलत हुन् ।
अझ अहिले सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान विदेशमा यता श्रीमतीले रमाइलो गरिन, दोस्रो बिहे गर्ने बढे भन्ने जस्ता अनेक समाचारका शिर्षक भेटिन्छन् । महिलाहरुकै कारणले समस्या निम्तियो, उनीहरु त्यस्तै हुन्छन् भन्ने सोच आज हैन समाजमा हिजैदेखिको हो ।
श्रीमान् परदेश गएपछी श्रीमतीलाइ हेर्ने दृष्टिकोण फरक भइहाल्छ । जाने बुझेका मान्छेले नै फरक व्यवहार गर्न थाल्छन् । यस्तै कारणले पनि हिजोआज विदेश जानेका घरमा मनमुटाव भएको देखिन्छ । कारण जे होस् तर दोषी महिलालाई नै देखाउने चलन जस्तै भएको छ ।
यस्तै कारणले कति महिलाहरुले आत्महत्या गरेका छन् । कति महिलाहरु घरबाट निकालिएका छन् । हत्या भएको छ । कतिले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् । मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रुपमा धादिङमा रहेर काम गरिरहँदा मैले यस्ता समस्याहरु धेरैको घरमा भेटेको छु । ‘महिलाले यति त सहनु पर्‍यो, यस्तै हुन्छन, उस्तै हुन्छन’ भन्नेहरु धेरै भेटेको छु ।
सबैले समस्यामा परेकी महिलालाई गरेको व्यवहार देख्दा मनमा प्रश्न उब्जिन्छ ‘के प्रत्येक समस्याको कारण महिला मात्र हुन् ?’
घरमुली पराइदेशमा हुँदा घर सम्हाल्न गति गाह्रो होला ? एकातिर समाज र आफन्तकै व्यवहार अर्कातिर घरव्यवहार । सुखदुःखमा साथ दिने श्रीमान् परदेश हुँदा महिलालाई भावनात्मक रुपमा कति असजिलो हुन्छ होला ? त्यसमाथि घर परिवार र समाजले अनेकाै बाहाना र लान्छनाले अप्ठेरो बनाउने गर्छन् ।
एकैछिन महिला भएर सोचौं त ? सबैकुरा उनीहरु कसरी सहन्छन् होला ? हामीले सुनेजस्तो महिलाको सहने शक्ति बढी भएर हैन बाध्यताले सहेका हुन् । र, सहन बाध्य बनाइएको हो ।
आफन्तसँग टाढा हुँदा घरका मानिसदेखि विदेशमा हुनेहरु समेत मिलेर काम गर्नुपर्छ । भावना बुझ्नुपर्छ । भावनात्मक सहयोग गर्नुको सट्टा सबैले महिलालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा तनाव बढी हुन्छ ।
कतिपयले त महिलालाई दबाएर नराखे मातिन्छन भनेर पनि अनेक व्यवहार गरेको देखिन्छ । अहिले त समय परिवर्तन भइसक्यो । पहिलेको जस्तो समय त छैन् । तर पुरुष मनोविज्ञान जति परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन भएको छैन । समयसँगै रहनसहन, चालचलन त फेरिए तर हाम्रा सोच त्यसरी फेरिएको छैन ।
महिला र पुरुष दुवैको भावना एउटै हो । पुरुषलाई जे गर्न मन लाग्छ, महिलाई पनि लाग्न सक्छ । त्यसैले विदेशमा श्रीमान् भएका महिला हुन् वा श्रीमानसँगै भएका महिला हुन्, उनीहरुलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण फेर्नु पर्छ । गाउँघरमा सामान्यतया घरझगडा हुँदा सासु बुहारीबिच जति नराम्रो हुन्छ त्यती ससुरासँग भएको पाइँदैन ।
त्यसैले महिलाले महिलालाई सहयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । सुखदुःख साट्ने मान्छे नहुँदा सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ । त्यसैले महिलाले महिलालाई सहयोग, माया र हौसला दिन आवश्यकता छ । विदेशमा हुनेका श्रीमतीमात्र सधै दोषी हुन्छन् भन्ने हुँदैन् । महिलाका बारेमा सोच्ने तरिकामा परिवर्तन गरौं ।
(रामकुमार थापा, चन्द्रज्योती एकिकृत ग्रामिण विकास समाज सिड्स धादिङले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
“दसैं” पहिला र अहिले
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले भने, “जनताले खोजेको सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दण्डहिनताको अन्त्य, महङ्गी नियन्त्रण जस्ता काम सरकारले गर्न सकेन । सरकार कहाँ किन अलमलिन थाल्यो थाहा छैन...
जबरजस्ती करणीमा परेकी बालिका विद्यालयबाट विस्थापित
दर्जनौंलाई घरवारविहीन बनाउने ‘सिरियल ठग’ पक्राउ
सत्र महीना पछि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थलमा पुनः हवाई सेवा शुरु